♫♥✿*ကျွန်မ ရဲ့ နားခိုရာ ♫♥✿*: ချင့်ယုံပါ
သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးသင်ခန်းစာယူသင့်တယ်ထင်လို့ မျှဝေပေးတာပါကျောင်းသင်ခန်းစာဆိုတာကိုယ်တိုင်ကအချိန်အကုန်ခံပြီး လေ့လာသင်ယူကျက်မှတ်ရပါတယ်.
ဘ၀နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သင်ခန်းစာကိုတော့ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့ နေ မြင်နေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်က အဲ့ ဒီလိုအမှားမျိုးမဖြစ်အောင် သတိနဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်ရင်တော့..ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အရင်းအနှီး စိုက်ထုတ်စရာမလိုပဲနဲ့ အလကားရတဲ့ အမြတ်ပေါ့နော်...ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာအလကားရတယ်ဆိုတာခပ်ရှားရှားရယ်..
ကောင်မလေးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦးပါ နယ်ကနေလာပြီးဘန်ကောက် မြို့ ပေါ်မှာကျောင်းလာတက်ရင်းနဲ့ Online ပေါ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..နောက်တော့ချစ်သူအမေရိကန်ိန်င်ငံသားကဘန်ကောက်ကိုအလည်ရောက်လာပါတယ်..အတူသွားအတူ
အတူတူနေပြီးသိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ဗီဇာသက်တန်းကုန်တော့အမေရိကားကိုပြန်ရတော့မှာမို့ ကောင်မလေးက မပြန်ခင်သူမကို တရားရုံးမှာ ဇနီးမယားအဖြစ်လက်မှတ်ထိုးသွားပါလို့ တောင်းဆိုတော့ ကောင်လေးက သူလက်မှတ် မထိုးပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ သူ့ မှာဇနီးရှိပါတယ် လို့ ပြောတော့ကောင်မလေးက နင်ငါ့ကိုတရားရုံးမှာ လက်မှတ်မထိုးပေးဘူးဆိုရင် အခုချက်ချင်းရဲ ကိုကြောင်းကြားပြီး ငါ့ကိုမတရားစော်ကားပါတယ်ဆိုပြီး တိုင်မယ်ပြောတော့ အဲ့ ဒီနိ်ုင်ငံခြားသားလဲ ကြောက်လို့ နှူတ်ပိတ်တဲ့ အနေနဲ့ သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်..သူ့ စိတ်ထဲမှာဘယ်သူမှ မသိနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ပြီး အလောင်းကို တစ်စစီ ခြေ လက် တွေ အကုန် အပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင်ဖြတ်ပြီး အမှိူက်ထဲ့ တဲ့ ပလပ်စတစ်အိတ်အမဲထဲထည့်ပြီးမြစ်ထဲသွားမျှောပါတယ် ရေကကျနေတာမို့ အလောင်းကမမြောဘဲနဲ့ ဒီအတိုင်းကျန်နေနေတာပေါ့ နောက်နေ့ အမှိုက်တွေ လိုက်ကောက်တဲ့ သူကအလောင်းကိုတွေ့ တော့ ရဲကိုအကြောင်းကြားပြီးရဲကအမှူစ်တော့ကောင်မလေးနေခဲ့တဲ တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကိုမေးတာ ကောင်မလေးဆီကို နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်အမြဲလာကြောင်း သက်သေအနေနဲ့တိုက်ခန်းရဲ့ လူသွားတဲ့ စင်္ကြန်တိုင်းမှာဗွီဒီယိုကင်မရာတပ်ထားတော့လူသတ်ရားခံကို လွယ်လွယ်နဲ့ ပဲ ပြန်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်..
အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားဟာ အဲ့လိုမျိုးဆိုဒ်တွေမှာ နိုင်ငံပေါင်းစုံက အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ရင်းနှီးအောင်မိတ်ဆွေဖွဲ့ ချစ်ရေးဆိုပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ကမ္ဘာလှည့်ကြာကူလီလူလိမ်တစ်ယောက်ပါ..
ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လေ့လာရေးခရီး၃ ရက်လောက်သွားချင်တယ်ဆိုပြီး မိဘတွေဆီမှာခွင့်တောင်းပါတယ် မိဘတွေကလည်းကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားမယ်ထင်ပြီး ကြည်ကြည်ဖြူဖြူပဲ ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်..နောက်၃ ရက်လောက်ကြာတော့ သမီးဖြစ်တဲ့ သူအိမ်ကိုပြန်မရောက်သေးလို့ကျောင်းနေဘက်သူငယ်ချင်းတွေဆီလိုက်မေးတာသူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံး တစ်ယောက်မှ လေ့လာရေးခရီးမသွားရပါဘူးတဲ့...ဒါဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ သွားတယ်ဆိုတာသိကြလားဘို့ မေးတော့ တိတိကျကျတော့မသိပါဘူး Online ပေါ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့Online ပေါ်ကသူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်မြို့ ဘယ်ရွာကလဲဆိုတာ မိဘတွေရော ငယ်သူငယ်ချင်းတွေရော တစ်ယောက်မှ မသိကြပါဘူး အဲဒါနဲ့ မိဘတွေကTV ကနေတဆင့် ဓါတ်ပုံနဲ့ တကွ လူပျောက်ကြော်ငြာ တင်ပါတယ်..သူတို့ ရဲ့ သမီးလေး Online ပေါ်က ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ လေ့လာရေးခရီး၃ ရက်သွားတာ ယခုအချိန်ထိ အိမ်ပြန်မရောက်သေးကြောင်း..တွေ့ ရှိက အကြောင်းကြားပါရန် ဆိုပြီး TV ကနေလွှင့်ပေးပါတယ် ဒါပေမယ့် ယခုအချိန်ထိ ကောင်မလေး အိမ်ပြန်မရောက်ခဲ့ပါဘူး သေလားရှင်လားတောင်မသိခဲ့ရပါဘူး..
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ ရေ..ဒီအဖြစ်အပျက်လေး၂ ခု ကိုကြည့်ပြီးတို့ တွေ သုံးသပ်ရအောင်နော်..
Online ပေါ်မှာက လူပေါင်းစုံ မို့လူ ကောင်းလားလူလိမ်လားဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး လူကောင်းတွေရှိသလိုလူလိမ်တွေလဲ ရှိပါတယ်...
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ မိမိရဲ့ တန်ဖိုး ဘ၀ သိက္ခာနဲ့ ပက်သက်လာရင် အားမနာတတ်တာအကောင်းဆုံးပါ တဲ့ .
အရာရာကို အသိလေးနဲ့ စဉ်းစာဆင်ခြင်ပြီးချင့်ယုံပါလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်
Written By ရွာသူလေးချမ်းချမ်း ရင်တွင်းဖြစ် at 8:16 AM
Labels: ဖြစ်ရပ်မှန် သုတ
စီဘုံးမထည့်ဘူးလား ဖွားချမ်းရေး) Your Welcome !!!
***မိန်းမသား ချင်းမို့ စာနာပါ***
တစ်လောက မလေးနဲ့ ထိုင်းနယ်စပ် HatYai က တရားမ၀င်တဲ့ Massage ခန်းမှာ မိန်းကလေး အယောက် ၇၀ လောက်ဖမ်းမိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ မြန်မာမလေး နှစ်ယောက်ပါ...